Video:-Dawlada Fadaraalka oo si kulul uga jawaabtay hadalkii Alshabaab!! – Idil News
Video:-Dawlada Fadaraalka oo si kulul uga jawaabtay hadalkii Alshabaab!!
Dowladda Somaliya ayaa cambaareysay digniin uu soo saaray ururka Al-Shabaab oo uga digaya waalidiinta Soomaalida inay carruurta u diraan Iskuullada iyo Jaamacadaha aan Islaamiga ahayn.
Wasiirka warfaafinta dowladda Somalia Cabdiraxman Cumar Cusmaan ayaa sheegay in talaabada Al-Shabab ay muujineyso mas’uuliyad darada madaxdooda iyo sida ay uga soo horjeedaan jiritaanka dadka Soomaaliyeed.
Waxa uu uga digay jaamacadaha iyo iskuulada iyo cid kasta oo gacan ka geysata ka qeyb qaadashada manhaj faafinaya sida uu hadalka u dhigay dhaqanka reer galbeedka inay cawaaqib ka kulmi doonto,hoos ka daawo muuqaalka.